Rotaka tany Ambilobe: nirefotra ny lakrimozena, potiky ny tora-bato ny kaomisarian’ny polisy | NewsMada
Ankoatra ny fahasimban’ny entana rehetra tao anatiny noho ny tora-bato nirarakompana, nodoran’ireo mpanao fihetsiketsehana koa ireo fiara nipetraka teo an-tokotanin’ny kaomisarian’ny polisy, ao Ambilobe, afakomaly alina. Noho ny vaovao niparitaka tao anaty facebook, momba ilay famonoana vehivavy bevohoka, ny nahatonga ny hatezeram-bahoaka sy niteraka savorovoro.
Nitroatra ny vahoakan’Ambilobe taorian’ny namantaran’ireo fokonolona ny fahafatesan’ilay vehivavy iray nitondra vohoka fito volana, tao Marivorahona, izay tsy hita nanomboka ny 3 febroary lasa teo. Vaovao izay niparitaka tao anatin’ny tambajotran-tserasera “facebook”. Fantatra tamin’izany fa voasambotry ny polisy ao an-toerana, afakomaly, ilay tompon’antoka tamin’ny asa ratsy. Nilaza ny loharanom-baovao iray fa tsy hita intsony ny zaza tao an-kibon’io vehivavy io, ny nonony ary ny taovao maromaro tao anatiny. Antony nahatonga ny hatezerana sy savorovoro tao an-toerana noho ny filan’ny fokonolona hanaovana fitsaram-bahoaka ilay nahavanon-doza. Nambaran’ny zandarimaria, araka ny loharanom-baovao, fa tao Mantaly, distrikan’Ambilobe, ny nahatrarana ilay nahavanon-doza ka notadiavin’ireo fokonolona ao an-toerana ilay voarohirohy hanamparany ny hatezerany. Resy lahatra anefa ny mponin’Ambilobe fa tsy tao ilay olona voarohirohy ka nirohotra namonjy ny biraon’ny kaomisaria polisim-pirenena izy ireo avy eo.
Nirefotra ny lakrimozena
Ny alin’ny asabotsy hifoha alahady teo, nitora-bato avy hatrany ny biraon’ny polisy raha mbola tsy nahita ilay olona notadiavin’izy ireo tao ny fokonolona. Vokany, potika tanteraka ny biraon’ny polisim-pirenena. Nirefotra ihany koa ny basy tao an-toerana vokatry ny zava-nisy. Fantatra tamin’izany fa fiara nitoby teo ivelan’ny biraon’ny kaomisaria no nodoran’ireo mpanao fihetsiketsehana. Nilaza ny loharanom-baovao iray fa may tamin’izany ny fiara miisa telo ka an’ireo polisy sy ny distrika izany, moto iray hafa ihany koa levon’ny afo. Nandoro kodiarana ihany koa ny fokonolona. Fanampin’izany ny vato eran’ny lalana ary maro ny fahasimbana tao an-toerana. Polisy roa ihany koa, hoy izy, naratra nandritra ny savorovoro. Nanoloana izany, niaro sy mpiasa sy ny tobin’ny polisim-pirenena ny zandarimarian’Ambilobe ary nandray ny fepetra manandrify izany ny solontenam-panjakana: ny distrika sy ny tompon’andraikitra samihafa ao an-toerana.
Nanao fanambarana, araka izany, ny zandarimariam-pirenena fa tsy maintsy misy tohiny ny raharaha efa eo am-pelatanan’ny mpitandro filaminana ka miangavy ny vahoaka izy ireo ho tony sy hiandry ny valin’ny famotorana. Efa samy mandray andraikitra, hoy izy ireo, ny solontenam-panjakana na ny mpanao famotorana. Nambarany koa tao anatin’io fanambarana io fa tsy anjaran’ny vahoaka ny mitsara ny olona ahiahina ho nahavita heloka fa efa misy ny andinin-dalàna mikasika ny paikadin-keloka mandrindra izany. Nohamafisiny tamin’izany fa avela eo ambany fahendren’ny fitsarana ny raharaha koa aoka samy hatoky ny fandraisana andraikitra ataon’ny fitondram-panjakana mahefa izay misy ankehitriny. Mirary fitoniana araka izany izy ireo fa tsy maintsy haseho etoana ny marina amin’ny fotoana mahamety izany
Tsy vahaolana, araka izany, ny fitsram-bahoaka ary miteraka tsy fandriampahalemana ny fanaovana izany. Tsy anjaran’ny vahoaka ny mitsara ny olona nahavanon-doza fa efa misy andinin-dalàna mikasika ny paikadin-heloka mandrindra izany. Efa eo am-pelatanan’ny fitsarana ny raharaha.